Lo muzi aye wasigcina ukubukeka ephakathi, elalibhalwe phakade ngokwabo e ukuthabela umlando onothileko yeNetherlands. Zenkolo namasiko maphakathi Europe akuyona bemthanda izivakashi, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ancient kodwa njalo Utrecht abasha is, benamandla umoya kwezikhathi zasendulo, ziyojabula nalabo abafuna ukuzwa umoya romance zizimbi.
Picturesque Utrecht ezikhangayo ezembula zonke mlando emlandweni waso, kwathi 47 BC. Kungani amasosha amaRoma ababefuna ukumaka imingcele umbuso omkhulu, wakha nenqaba enamandla, yaphenduka idolobha lanamuhla, kubhekwa inhloko-dolobha wesitimela izwe ngoba siwela yibo bonke izitimela.
Ekhulwini VII, emva aphoyintimenti uPapa protege, lapha kufika ukugcotshwa Utrecht, futhi edolobheni elincane iba lwesivikelo yangempela ubuKristu. Kukhona lenqwaba amasonto, amasonto, zezindela, ezibonisa ukuphila okungokwenkolo ocebile. Utrecht, elise emfuleni iRhine XII - XIII eminyaka uguqulwe ube yezitolo ezinkulu, futhi phakathi nekhulu leminyaka XVI, inhloko yabangamashumi izifundazwe eziyisikhombisa ngemvume iSivumelwano Utrecht, okuyinto omula kuqala dalo we-republic enobunye.
Utrecht Colorful, ogama ezikhangayo ukwenza idolobha ukubukeka esiyingqayizivele emehlweni izivakashi, futhi kufana omakhelwane bayo, futhi ngesikhathi esifanayo has ehlukile yayo siqu. Iziteshi Sika idolobha fabulously enhle zisikhumbuza i-Amsterdam ezimibalabala, kodwa omunye umehluko isasekhona: le ukuvakasha sehliselwe amanzi futhi maqhugwane yokuhlala kukhona okuncane ephakeme. Indaba ezimbili design ekhuphuka kanye abathengisi, ababe izitolo ezohwebo, futhi ngezansi kwawo, ngezinye kakhulu pier bakha emafektri yabo, kodwa manje amanzi angaba isidlo ku amathilomu ethokomele nezindawo zokudlela.
St kukaMartin Cathedral kanye Tower
Ngesikhathi inhliziyo yedolobha Cathedral of St Martin - omunye ezikhangayo ezinkulu zenkolo Utrecht naseNetherlands. Isonto lamaProthestani, okuyinto kubhekwa isibonelo French Gothic, uvele 1254 esizeni i zethempeli lasendulo. Kutholwe eduze umbhoshongo lombhishobhi, St Cathedral kukaMartin ekuqaleni esixhumene nalo, kodwa ngemva neziphepho enzima ngekhulu XVII, izakhiwo ezimbili bahlukana, kusukela ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi lesikhumbuzo yezakhiwo labhujiswa.
uphawu episcopate - umbhoshongo belfry nge ekuphakameni 112 metres - yakhelwe endaweni lapho amasosha angamaRoma afike wakha nenqaba yokuzivikela. NgeNkathi Ephakathi kwakubhekwa njengento isakhiwo kunazo zonke e-state. Kusukela emphemeni observation inikeza umbono omangalisayo emzini wasendulo, zimbozwe ezinganekwaneni, kodwa ungakwazi neze ukukhuphuka konke, phela zidlule izinyathelo 465. Nokho, izivakashi abaye banqoba indlela up, bavume ukuthi yi kuwufanele umzamo, ngisho Amsterdam-panorama kungajatshulelwa ngosuku olucwathile.
Utrecht ezikhangayo: Kasteel de Haar
Akukona nje kuphela ngobukhulu kodwa futhi edume kunazo ngenxa yokuthi iba khona engavamile, castle okukhazimulayo itholakala eduze komuzi. isakhiwo Inamandla, ethutha izivakashi ezikhathini Knights abanesibindi, ezakhiwe wezakhiwo waseHolland. Castle de Haar, sizungezwe nomsele futhi udonga ungenakunqotshwa, kuyinto umfanekiso elimangalisayo zikhathi ezigcwele izinkathazo Ephakathi. Qinisekile simangalele yezakhiwo nge ukumiswa amabhuloho, imibhoshongo, nemibhoshongo, unyaka ngamunye Sebawoti, joust. Ngakho iziphathimandla zizama avuselele isiko ukuphila ephakathi. Ngigajwe epaki elikhulu edude enqabeni, lapho ungakwazi ukungcebeleka, amaholide eziningi kuqhathaniswa ne Versailles.
Ngo 1636, wabonakala inyuvesi leli dolobha elikhulu kunawo wonke eYurophu ke ehostela zazakhiwe izakhiwo academic, futhi kusukela ngaleso sikhathi lapho ebusa umfundi emkhathini ekhethekile liwuhlukanise kusukela kweminye imizi Holland Utrecht ethokomele. Izikhangibavakashi, izithombe zazo kungabonakala zonke iziqondiso izivakashi, yabakhanga nezivakashi zakwamanye amazwe.
By endleleni, le nyuvesi usebenza evulekile emphakathini ngokuvakashela Observatory, ifakwe ngezibonakude zanamuhla, futhi wonke umuntu uzokwazi ukugcina ezinkanyezini ezikude.
Kusukela Utrecht ephapheme kuyinto enkulu ujantshi umgwaqo ihabhu yezwe, akumangalisi ukuthi umuzi ine Museum engavamile, ogama ziphephile ngeke nentshisekelo abantu babo bonke ubudala. Kunombhalo isitimela esiteshini wangaphambili Het Spoorwegmuseum - indawo eyingqayizivele lapho ungabona iqoqo elikhulu amapotimende ubudala futhi iziqu, ukuhlala cab Simulator noma ride esitimeleni mini.
Ukuhamba amabhasi emfuleni
Ukuze ujabulele ngokugcwele emkhathini emangalisayo futhi ubone izinto ezahlukene Utrecht (isithombe incazelo kanye namakheli azo ingatholakala amamephu, isiqondiso ekuphileni), ngokwanele ukuba bahambahambe phezu waterbus. Uhambo ihlala isikhathi esingangehora kungakhathaliseki ukuthi phakathi naleso sikhathi izivakashi uzobona izindlu ezindala, izindonga zomuzi enamandla, futhi-ke, iziteshi efanayo Duplex, okuyinto baye baba eliyingqayizivele njengoba sihlanganisa lonke izwe Holland.
Utrecht, lapho abantu bendawo babiza "edolobheni elidala ngenhliziyo enkulu", abadumile wonke ukukhanya emhlabeni show Trajectum Lumen. Conductive emigwaqweni unyaka wonke, ke enthralls ukukhanyisa kumnandi, eyenziwe ochwepheshe zangempela. abaculi Modern ukudala izithombe ezimangalisayo ku ezindongeni zezakhiwo, imigwaqo, uphahla ngisho ngaphansi amabhuloho.
Njengoba obonwa izivakashi ukubona umbukiso ukukhanya - lena indlela engcono kakhulu ukubona abe kolunye uhlangothi lwawo, umuzi omkhulu. Ngifuna ukuba azulazule ubusuku bonke, ejabulela izithombe amahle ukuthi komculo kokubili kwi mbumbulu zezakhiwo, futhi phezu komgandayo ezitaladini futhi illuminations ezimibalabala izivakashi ushayele omunye ezikhangayo esemqoka Utrecht.
izivakashi Foreign bathi baye lapha okuvelayo lokuhlola emzini, ukuhlupheka Ephakathi. Okunethezeka izakhiwo, iziteshi Duplex ekhumbulekayo ukukhanya okukhanyisa kuwufanele wokubona noma ubani ofuna ukuba bafunde indlela ukuhlanganisa esidlule nalesi simiso e-Utrecht. Umuzi, engesiyo njengabanye, has ukunambitheka yayo.
Njengoba obonwa izivakashi, ngokoqobo idlula okulindele, futhi amanye aze ngisho ukuzwa isiko ukushaqeka emehlweni ezikhangayo esemqoka Netherlands amapharele.
Indlela esiphatha ngayo i-endometriosis: kukhethwa amaqhinga
Ukuthuthukiswa methodical kwesifundo evulekile